စီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းမျာ? - Yangon Media Group
စီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းမျာ?
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများကို တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ပူး ပေါင်းကော်မတီက အစီရင်ခံတင်ပြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီမှ စက်တင်ဘာအထိ ခြောက်လတာအတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်းပါ လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယင်းသို့လုပ်ဆောင်ရန် အစီရင်ခံ အကြံပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ “သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစီမံ ကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းများအတွက်လျာထား ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအပေါ် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း မြို့နယ်အဆင့်မှ စတင်၍ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အ စည်းများနှင့် အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများကို တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်”ဟု ဥပဒေ ကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ ကိုယ်စားလှယ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၂) ဦးထွန်းထွန်းဟိန်က လွှတ်တော်သို့တင်ပြသည်။
လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေ တောင်းခံရာတွင် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများသည် ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း ရှိ၊ မရှိ၊ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်မှု ရှိ၊ မရှိ၊ ပြည်သူများအ တွက် အကျိုးရှိ၊ မရှိ၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်ကူပြုမပြု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှိ၊ မရှိ စသည်တို့ကို ဘက်စုံလေ့လာဆန်းစစ်ကာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သ ဘောတူ ခွင့်ပြုချက်ကို ရရှိထားပြီးသော လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ ဖြစ်ရမည်ဟု အမျိုးသား စီမံကိန်းဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ “လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအတွက် ရန်ပုံ ငွေ တောင်းခံရာတွင် အထက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်အပြင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများ၏ စီမံကိန်း ကုန်ကျ စရိတ်၊ ပြောင်းလဲမှုအပါအဝင် လုပ်ငန်း ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိုလည်း ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ဦးထွန်းထွန်းဟိန်က တင်ပြသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းသည့် ခြောက်လတာ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပူးပေါင်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့ဖြင့် စိစစ် ခဲ့ပြီး စိစစ်တွေ့ရှိချက်ကို ဥပဒေကြမ်း ပူး ပေါင်းကော်မတီက ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများလုပ်ကာ ယခုကဲ့သို့ အစီရင်ခံ အကြံပြု ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဥပဒေကြမ်းအပေါ် ပြင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စား လှယ်များရှိက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် နောက်ဆုံးထား အမည်စာရင်းပေးပို့ရန် လွှတ်တော် နာယကမှ ကြေညာခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာဝိုင်းနဲ့ တွဲဖက် ရိုက်ကူးသွားမှာမို့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဧငြိမ်းဖြူ
ဒီရေတောများ တည်ထောင်ရန် ပုစွန်မွေးကန်များ ဖျက်သိမ်းမည် ဆိုခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိ
ဖြူးမြို့အနီး ပဲခူးရိုးမကိုဗဟိုပြု ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့သည့်နေရာများကို ငလျင်ပညာရှင်များ သွား??
မကွေးမြို့ မြို့ပတ်လမ်း အဟောင်းဘေးရှိ ကျူးကျော် နေအိမ်များ ဇွန် ၇ ရက် နောက်ဆုံးထား ရွှေ့ရမည်
မြောက်ကိုရီး ယားထက် အမေရိကန်က နျူက လီးယား အင်အားပိုကြီးကြောင်း သမ္မတထ ရန့်ပြောဆို